ဘာကြောင့် ဆီးအောင့်မထားသင့်တာလဲ – Gentleman Magazine
( ဒါကို ဖတ်ပြီးနောက် တစ်သက်လုံး ဆီးအောင့်ဖြစ်တော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး)
သင် အရက်သောက်တဲ့ ညတစ်ညမှာ Seal ပွင့်သွားတာကို ခံစားဖူးပါသလား?? ဘီယာ သုံးလေးလုံးသောက်ပြီးတော့ သေးပေါက်ချင်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခေါက် ပေါက်မိရုံနဲ့ နောက်ပိုင်း အိမ်သာကို မိနစ် ၂၀ တစ်ခါလောက် သွားနေရပါတယ်။
ပထမဆုံး သေးပေါက်ပြီးတော့ ဆက်ဆက် ပေါက်ချင်နေရခြင်းဟာ သေးပေါက်ခြင်းက ဦးနှောက်ကို ကောင်းတဲ့ Signal တွေ လွှတ်ပေးနေလို့ပါ။ အဲဒါနဲ့ သင့်ဦးနှောက်က ” သားကြီး၊ ခုနက သေးပေါက်တာ ကောင်းတယ်၊ ခုထပ်ပေါက်မယ်။” အဲဒိ Msg ကို ပို့နေလို့ပါ။
အဲလိုမျိုး ခဏခဏ မသွားချင်လို့ သင် အောင့်ထားလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါဟာ မှားပါတယ်။ တင်းပြည့်နေတဲ့ ဆီးအိတ်က အန္တရာယ် တစ်ချို့ ပေးလို့ပါ။
ဥပမာ အနေနဲ့ ဒေါက်တာတစ်ယောက်က သူ စစ်တပ်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က အဖြစ်အပျက်လေးတစ်ခုကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
စစ်သားတစ်ယောက်က မနေ့ညက အရမ်းသောက်ပြီး ဆေးခန်းကို ရောက်လာပါတယ်။ စစ်ဆေးကြည့်တော့ သူ့ဆီးအိတ်က ဝိုင် သုံးပုလင်းစာလောက် အရည်တွေကို ထမ်းထားရပြီး ပေါက်ကွဲသွားတာပါ။ သူ့တစ်သက်မှာ ပုံမှန်ဆီးသွားဖို့ မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သူ့ လိင်တံမှာ ဆီးသွားကိရိယာကြီးကို တစ်နေ့ကို လေးကြိမ်ကနေ ခြောက်ကြိမ်အထိ တပ်ပေးနေရပါတယ်။
အရမ်း မလန့်ပါနဲ့။ အဲဒါဟာ အဆိုးဆုံး အခြေအနေပါ။ ခရီးသွားရင်း တစ်နာရီ၊ နှစ်နာရီလောက် အောင့်ထားတာကတော့ အဲဒိလို တစ်သက်တာ အန္တရာယ် မရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆီးသွားချင်တာကို အကြာကြီး အောင့်ထားရင်တော့ သင့် ဆီးအိတ်မှာ အရမ်းထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
သင် အများသုံး သန့်စင်ခန်းတွေမှာ သွားရမှာ ကြောက်လို့ ခဏခဏ အောင့်ထားရင် ကာလရှည် ဆီးလမ်းကြောင်း လက္ခဏာ တွေကို ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ခဏခဏ နာကျင်စွာ ဆီးသွားနေရတာ လိုမျိုးပါ။
အခုပဲ သေးပေါက်ချင်လာပြီ မလား။
ဘာကွောငျ့ ဆီးအောငျ့မထားသငျ့တာလဲ ( ဒါကို ဖတျပွီးနောကျ တဈသကျလုံး ဆီးအောငျ့ဖွဈတော့မှာ မဟုတျပါဘူး)
သငျ အရကျသောကျတဲ့ ညတဈညမှာ Seal ပှငျ့သှားတာကို ခံစားဖူးပါသလား?? ဘီယာ သုံးလေးလုံးသောကျပွီးတော့ သေးပေါကျခငျြလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ တဈခေါကျ ပေါကျမိရုံနဲ့ နောကျပိုငျး အိမျသာကို မိနဈ ၂၀ တဈခါလောကျ သှားနရေပါတယျ။
ပထမဆုံး သေးပေါကျပွီးတော့ ဆကျဆကျ ပေါကျခငျြနရေခွငျးဟာ သေးပေါကျခွငျးက ဦးနှောကျကို ကောငျးတဲ့ Signal တှေ လှတျပေးနလေို့ပါ။ အဲဒါနဲ့ သငျ့ဦးနှောကျက ” သားကွီး၊ ခုနက သေးပေါကျတာ ကောငျးတယျ၊ ခုထပျပေါကျမယျ။” အဲဒိ Msg ကို ပို့နလေို့ပါ။
အဲလိုမြိုး ခဏခဏ မသှားခငျြလို့ သငျ အောငျ့ထားလို့ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲဒါဟာ မှားပါတယျ။ တငျးပွညျ့နတေဲ့ ဆီးအိတျက အန်တရာယျ တဈခြို့ ပေးလို့ပါ။
ဥပမာ အနနေဲ့ ဒေါကျတာတဈယောကျက သူ စဈတပျမှာ တာဝနျထမျးဆောငျစဉျက အဖွဈအပကျြလေးတဈခုကို ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
စဈသားတဈယောကျက မနညေ့က အရမျးသောကျပွီး ဆေးခနျးကို ရောကျလာပါတယျ။ စဈဆေးကွညျ့တော့ သူ့ဆီးအိတျက ဝိုငျ သုံးပုလငျးစာလောကျ အရညျတှကေို ထမျးထားရပွီး ပေါကျကှဲသှားတာပါ။ သူ့တဈသကျမှာ ပုံမှနျဆီးသှားဖို့ မဖွဈနိုငျတော့ပါဘူး။ သူ့ လိငျတံမှာ ဆီးသှားကိရိယာကွီးကို တဈနကေို့ လေးကွိမျကနေ ခွောကျကွိမျအထိ တပျပေးနရေပါတယျ။
အရမျး မလနျ့ပါနဲ့။ အဲဒါဟာ အဆိုးဆုံး အခွအေနပေါ။ ခရီးသှားရငျး တဈနာရီ၊ နှဈနာရီလောကျ အောငျ့ထားတာကတော့ အဲဒိလို တဈသကျတာ အန်တရာယျ မရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဆီးသှားခငျြတာကို အကွာကွီး အောငျ့ထားရငျတော့ သငျ့ ဆီးအိတျမှာ အရမျးထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။
သငျ အမြားသုံး သနျ့စငျခနျးတှမှော သှားရမှာ ကွောကျလို့ ခဏခဏ အောငျ့ထားရငျ ကာလရှညျ ဆီးလမျးကွောငျး လက်ခဏာ တှကေို ခံစားရပါလိမျ့မယျ။ ခဏခဏ နာကငျြစှာ ဆီးသှားနရေတာ လိုမြိုးပါ။
အခုပဲ သေးပေါကျခငျြလာပွီ မလား။
Previous: အရက်သောက်ခြင်းကြောင့် လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို မထိခိုက်နိုင်
Next: ပန်းသေပန်းညှိုးရောဂါ ကာကွယ်ဖို့ နည်းလမ်း ၁၀ ခု